International News – Nepal News Hub
May 17, 2018 NepalNewsHub
International News, National News, News, Science & Technology, Tech Newsdv lottery, DV Lottery Result, EDV LotteryLeaveacomment
January 18, 2018 March 8, 2018 NepalNewsHub
Need 4,ooo hours watch time and 1,000 subscribers in YouTube Channel within 1 year or 12 months. For More, watch the video below: Click Here or on Image Please follow and like us:0
International News, News, Science & Technology, Tech NewsYouTube New Rules, YouTube UpdatesLeaveacomment
एजेन्सी : ट्युटरले अाफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाइ अब थप सुबिधा दिने भएको छ । यस कम्पनीले दिदै अाएको स्टाटस लेखन प्रकृयामा सिमिततालाइ परिवर्तन गरेको छ । विश्व भरि चर्चित रहेको यस कम्पनीले अब प्रयोगकर्ताहरूले स्टाटसमा १२० शब्दहरू भन्दा बढीमा बिचारहरू ब्यक्त गर्न सक्ने बताएको छ । अाफना परिवार, मित्र जन र अरू व्यक्तिहरूसँग लगाताररूपमा सम्पर्क बनाइ राख्ने एउटा सशक्त माध्यम ट्युटर पनि हो । फेसबुक जस्तै प्रचलित रहेको सामाजिक संजाल मध्ये ट्युटर पनि एक हो । तर ट्युटरमा फेसबुक जस्तै धेरै शब्दहरूमा स्टाटस लेख्न सकिदैन । १२० शब्दहरूमा मात्र अाफ्नो कुरा ब्यक्त गर्नु…
International NewsInternational News, Social Media, TwitterLeaveacomment
October 12, 2017 October 14, 2017 NepalNewsHub
के अमेरिका जान चाह्नु हुन्छ ? यदि हो भने यस पाली पनि अमेरिका जाने dv lottery 2019 खुलिसकेको जानकारी गराउँछाै । Dv भर्नको लागि www.dvlottery.state.gov साइट मा जानु पर्दछ । त्यहाँ फर्ममा अाफ्नो मागे बमोजिम सारा जानकारीहरू दिनु पर्ने हुन्छ । यो डिभी लाैटरी अक्टुवर ३ तारीक २०१७ मंगलवारका दिन मध्यान्ह देखि पुर्ण रूपले खुल्ला गरिएको छ । यसको अन्तिम मिति नोभेम्बर ७ तारिक २०१७ सम्म दिनको बार्ह बजे सम्म रहनेछ । त्यस पछि तोकिएको म्याद नाघे पछि भरिएको डिभी मान्य हुने छैन । तसर्थ, छिटै नै अाजै अाफ्नो स्थान सुनिश्चित…
International News, Science & Technologydv, dv lotteryLeaveacomment